China CHAIN ​​SLINGS Vagadziri uye Vanotengesa | Chenli
Iine yakasarudzika yekugadzira chiitiko, yekutenga maitiro
▲ Chenli yakakwirira simba macheni, tinokwanisa kuburitsa welded cheni, kusimudza (hoisiting) cheni, mugodhi cheni, mhuka mhuka, simudziro mubhadharo keteni, matairi tirera uye Plastiki yakafukidzwa keteni nezvimwe zvingangodaro mazana matatu marudzi, ayo akashandiswa zvakanyanya muchinangwa chakasiyana sekusimudza, kusimudza , kuburutsa, kurongedza, mine, gadheni etc.
▲ Keteni iyi inotsvedza inoumbwa nemhete dzetenzi, chinongedzo chekubatanidza, cheni uye kupera masuti.
▲ Iyo yakareba inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
▲ Iwe unogona kusarudza chero rudzi rwezvikorekedzo zvichienderana nebasa rakasimudzwa.
▲ hen kusimudza kona haina kuzopfuura 60 °.
▲ Chimiro chakachengeteka: 4: 1. Tinogonawo kugadzira SF: 5: 1 & 6: 1.
▲ Chengetedzo chinhu: min 4 times
▲ Kuisa chiratidzo: G80 kana inodikanwa nemutengi.Tinogonawo kugadzira iyo isina-standard keteni zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
▲ Chenli inogadzira marudzi emaketani, ayo anogadzirwa neakadzika-kabhoni alloy simbi. Ivo vane hunhu kana anti-kukanganisa, yakakwirira kurodha huwandu, ductility, elongation.
▲ Chenli G80chain inosangana neDIN5687, DIN5688, yeGerman standard, ISO3076. Tinogona kugadzirisa pameso zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
▲ Chenli G80 yakakwirira simba tambo, kutyora simba≥800MPA.
Kusimudza maketeni anoshandiswa kusimudza nekurongedza zvinhu zvakachengeteka uye nemazvo. Maketeni edu ese ari maviri G80 & G100 yakagadzirwa nesimbi yepamusoro-simbi iyo yakadzimwa uye yakagadzirirwa kuchengetedzwa kwakawedzerwa.
Iwe unogona kusarudza chaiyo yekusimudza keteni inodiwa kuti uite zvaunoda chaizvo. Isu tinopa maviri, maviri, matatu uye mana giredhi giredhi macheni anouya pakureba kubva kune imwe kusvika kumamita gumi, nepo keteni rimwe nerimwe richisvika 6mm kusvika 32mm ukobvu huwandu. Iwe unogona kuenderera zvakare kugadzirisa yako yekusimudza keteni nekuwedzera imwe yenyaya yedu yakawandisa mawoko uye kupfupisa masango.
Ese maviri macheni edu nengetani zvikamu zvakavakirwa giredhi 80 yekupisa-inobatwa alloy simbi inoedzwa zvakakwana uye yakasimbiswa. Giredhi 80 simbi yakagadzirirwa zvakananga pamusoro pekusimudza michina.
Kana iwe uine chero mibvunzo pamusoro pekusimudza maketeni saka ndapota taura neyedu nyanzvi timu.
▲Chenli inogadzira marudzi emaketani, ayo anogadzirwa neakadzika-kabhoni alloy simbi. Ivo vane hunhu kana anti-kukanganisa, yakakwirira kurodha huwandu, ductility, elongation.
▲Chenli G80chain inosangana neDIN5687, DIN5688, yeGerman standard, ISO3076. Tinogona kugadzirisa pameso zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
▲Chenli G80 yakakwirira simba tambo, kutyora simba≥800MPA.
Yepfuura: HORIZONTAL KUKOSHESA CLAMPS PDB TYPE
Inotevera: KUSHANYA CHAINI NEBHUKU
110v Magetsi Chain Hoist
2 Tonne Chain Vharani
2t Chain Bhinda
Alloy Chain Kurovera
Beaver Chain Vharu
Dema Gumbo Chain
Chain Vimba Crane
Chain Vimba Manual
Chain Vharira Inoshanda
Chain Kudonha Kutenderera
Maketeni Uye Slings
Clevis Hook Kwekusimudza
Crane Chain Vharira
Crane Chain Kurovera
Kusimudza Maketeni Uye Slings
KUSHANYA CHAINI NEBHUKU
EN818 KUDZOKA CHAIN